प्रधानमन्त्रीलाई जिग्रीको पत्र: हामी रंगशाला... :: Setopati
प्रधानमन्त्रीलाई जिग्रीको पत्र: हामी रंगशाला बनाउछौँ भन्दा सरकारलाई निर्णय गर्न कुन कुराले रोकिरहेको छ?
कुमार कट्टेल (जिग्री) काठमाडौं
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली जिम्बाबेबाट एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाएर फर्किएको केही महिना बित्यो। टोलीलाई स्वागत गर्न विमानस्थलमा क्रिकेटप्रेमीको भीड लागेको थियो। स्वागतका लागि खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्मा पनि विमानस्थल पुगेका थिए।
क्रिकेटप्रेमीले त्यहाँ खेलाडीलाई स्वागत मात्र गरेनन्, नेपाली क्रिकेटका अघि बढाउन गर्नु पर्ने आवश्यक कामका लागि सरकारलाई घचघच्याए।
कतिपय विषयमा उनीहरूले नारा नै लगाए। तीमध्ये एउटा नारा थियो- टुँडिखेलमा खेलेर वर्ल्डकप खेल्न सकिन्न…।
यो नाराको मर्म थियो— स्तरीय क्रिकेट ग्राउण्ड बनाऊ। यसै सन्दर्भमा चौरमा अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलाउनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्यका लागि पछिल्लो पटक धुर्मुश–सुन्तली फाउण्डेसनले एउटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रंगशाला बनाउन तयार भए पनि सरकारी तवरबाट कुनै प्रक्रिया पुरा नभएको गुनासो हाँस्य कलाकार तथा रंगशाला निर्माण अभियानमा जोडिएका कुमार कट्टेल(जिग्री)ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका नाममा पत्र लेखेका छन्।
उनले यसबारेको बाँकी प्रक्रिया चाँडो पूरा गरिदिन आग्रह गर्दै फेसबुकमा लेखेका छन्। कुमारले आफ्नो फेसबुक पेजमा यसरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तस्बिरसहित पत्र लेखेका छन्।
यो पत्र एउटा क्रिकेटप्रेमी नेपालीको नाताले हजुरलाई लेख्दैछु।
आज नेपालीको छोरो सन्दीप लामिछनेले आईपीएलमा सनसनी मच्चाइरहँदा आम नेपालीहरुको झैँ हजुरको पनि छाती गर्वले फुलेको होला। भोलि सन्दीप लामिछाने मेरो देशको भन्दा हजुरको पनि इज्जत बढ्ला। सन्दीप लामिछाने, पारस खड्का हरु खाली क्रिकेट मात्रै खेलिराका छैनन्, विश्वमा नेपाललाई चिनाइराका पनि छन्।
धेरै दुःख गरेर हाम्रा खेलाडीहरुले नेपाललाई एकदिवसीय मान्यता दिलाएका छन्।
तर बिडम्वना तिनै महान खेलाडीहरुलाई खेल्नको लागी हामीसँग एउटा राम्रो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियम पनि छैन।
अब हामीले ४ वर्ष भित्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट स्टेडियम निर्माण सम्पन्न गरेर धेरै भन्दा धेरै एकदीवसीय खेलहरु खेल्नु छ। त्यसको लागि विगत दुई महिनादेखि अन्तरराष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट स्टेडियम निर्माण अभियानमा हामी रात दिन नभनी लागि रहेका छौँ।
धुर्मुश–सुन्तली फाउन्डेसनको संयोजन र सरकारसँगको सहकार्यमा निर्माण हुने स्टेडियम को प्रस्तावना नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरेको धेरै दिन भैसकेको छ। तर रकेटको गतिमा देश विकास गर्ने भनेर जनतासामु सपना बाँडेर जनताको जनमत प्राप्त गरी देश को कार्यकारी प्रमुख तपाईं स्वयम हुँदा समेत तत्काल यसको निर्णय लिन ढिला किन ?
हामी नेपाली जनताले हाम्रो क्रिकेट स्टेडियम हामी आफै बनाउँछौँ, सरकारले जग्गा उपलब्ध गराइदिनु पर्‍यो। कुनै पनि हालतमा देश बन्नु पर्छ भनेर सकारात्मक् सोच राख्ने हामी युवाहरुले नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्न खोजेको मात्र हो।
जसलाई तपाईँजस्तो देश बन्नु पर्छ भन्ने सोच राख्नु हुने प्रधानमन्त्रीले त अलिकति पनि विलम्ब नगरी तत्काल ‘निर्णय लिएर अगाडि बढ्नुहोस्, सरकार तपाईँहरुको साथमा छ भन्नु पर्ने हैन र ?’
युद्धपछि विकासको तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको अफ्रिकी मुलुक इथियोपियामा यदि कुनै विदेशी नागरिकले लगानी गर्न चाहन्छ भने ४८ घण्टाभित्र त्यहाँको सरकारले सम्पूर्ण सरकारी प्रक्रिया पूरा गराउँछ।
तर हामी त यही देशको नागरिक यही देश भित्र देशले गर्व गर्न लायक को स्टेडियम बनाउन खोज्दा सरकारलाई निर्णय गर्न कुन कुराले रोकिरहेको छ?
‘सरकारले चाहे एक दिनमै के गर्न सक्छ’ भन्ने कुरा को पुष्टि भर्खरै सरकारले चालेको सिन्डिकेटविरुद्धको कदमबाट पनि स्पष्ट हुन्छ।
हामी आशा गर्छौँ नेपाली क्रिकेटका लागि पनि त्यो एक दिन कत्ति पनि विलम्ब नगरी आउनेछ, अन्यथा नेपाली क्रिकेटलाई माया गर्ने हामीजस्ता लाखौं नेपाली जनता देशको झण्डा बोकेर हामीले प्रस्ताव गरेको जग्गामा झण्डा गाड्न बाध्य हुनेछौँ।
तर हामीलाई विश्वास छ, तपाईँजस्तो विकासप्रेमी प्रधानमन्त्रीले हामीलाई झण्डा गाड्न बाध्य बनाउनु हुने छैन।
जय नेपाली क्रिकेट
‘टुँडिखेलमा खेलेर विश्वकप पुगिन्न’
प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख ३१, २०७५, ०९:१२:३२
युएईविरूद्ध सिरिज खेल्ने नेपाली टोली छनोट
राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोली फर्कियो
बीपीएलमा सन्दिपको औषत प्रदर्शन, युएई भ्रमणका लागि नेपाल फर्कदैं
उपाधिका लागि नेपालले आज थाइल्याण्डको सामना गर्दै